१४ खर्ब ७० अर्ब पुग्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति, १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने - Arthakoartha.com
१४ खर्ब ७० अर्ब पुग्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति, १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने
काठमाडौं, ११ मंसिर । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा मुलुकको कुल विदेशी विनियम सञ्चिति पाँच प्रतिशतले बढेर रू. १४ खर्ब ७० अर्ब २६ करोड पुगेको छ । गत असार मसान्तमा रू. १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ४.९ प्रतिशतको वृद्धि भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षकोे विवरणअनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७७ असार मसान्तमा रू. ११ अर्ब ६५ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १२ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७७ असार मसान्तमा रू. १२ खर्ब २६ अर्ब १२ करोड रहेकामा गत असोज मसान्तमा ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १२ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७७ असार मसान्तमा रू. १ खर्ब ७५ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा ३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब ८१ अर्ब रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने बैंकले बताएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कूल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपात क्रमशः ३९ प्रतिशत, ११७.३ प्रतिशत र ३२.९ प्रतिशत रहेका छन् ।
प्रभु बैंकको २ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा
नेपाल पुनर्बीमाद्वारा २० प्रतिशत लाभांस दिने प्रस्ताव